१ हजार ६५८ हेक्टरमा अलैंची जोन क्षेत्र विस्तार
साउन ११, पाँचथर । जिल्लाको सिदिन र एकतिनमा २०७३/ ७४ देखि शुरु गरिएको अलैंची जोन कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा पर्ने उक्त क्षेत्रसँगै अहिले पूरै गाउँपालिकामा अलैंची जोन विस्तार गरिएको हो । अलैंची जोन एकाइ कार्यालयका कृषि अधिकृत प्रकाश विश्वकर्माका अनुसार ५११...
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ८६ हजारको आवदेन, ५७ हजारले बुझेर लगे
साउन १०, फिदिम । पाँचथरमा हालसम्म ८६ हजार जिल्लावासीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८६ हजार २ जनाले उक्त परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका हुन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार पाँचथरवासीको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्यक...
प्रदेश–१ मा ५६% रोपाइँ
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मा हालसम्म ५६ दशमलव ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्ला (सुनसरी, मोरङ र झापा) मा ८० प्रतिशत तथा पहाडका जिल्लामा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत हृदयराम पोखरेलले जानकारी दिए । प्रदेशमा तीन लाख ४० हजार ८२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखे...
बाढी कारण लाखौं मूल्यको तरकारी नष्ट
साउन ९, विराटनगर(अस) । असार अन्तिम साता आएको बाढीका कारण मोरङका किसानले लगाएको तरकारी बाली नष्ट भएको छ । बाढीको पानी खेतबालीमा पस्दा उनीहरुले लाखौं मूल्य बराबरको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाकी ५५ वर्षीय उर्मिलादेवी सिंह यतिखेर सुकेको बोटबाट खोर्सानी केलाउन ब्यस्त छिन् । असार अन...
सिसी क्यामरा जडानमा प्रहरी बेखवर !
साउन ९, इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गैरकानूनी रुपमा सिसी क्यामरा जडान गरेको पाइएको छ । सदरमुकाम इनरुवा, धरान, इटहरी लगायतका क्षेत्रमा रहेको विभिन्न पसल तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुमा गैरकानूनी रुपमा सिसी क्यामरा जडान गरेको पाइएको हो । सुन पसल, कस्...
वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन
साउन ८, विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गएको आर्थिक वर्षमा कूल रू. ७ अर्ब १३ करोड ७८ लाख २४ हजार राजस्व संकलन भएको बताएको छ । कार्यालयले सो अवधिमा कूल रू. ६ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा कूल रू. ५...
मुद्दा फछ्र्योटबाट रू.३ करोड बढी राजस्व असुली
साउन ७, भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा दर्ता भएका मुद्दा फछ्र्योटबाट मात्रै रू.३ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले ५३० मुद्दा फछ्र्योट गर्दा रू.३ करोड ३६ लाख ५८ हजार राजस्व असुली गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले जा...
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर : तीन सयको भ्याट खारेज, ६८ को कारोबार रोक्का
विराटनगर (अस) । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ६८ ओटा व्यापारिक फर्मको सम्पूर्ण कारोबारका साथै बैंक खाता रोक्का गरेको छ । कार्यालयले कारबाहीमा परेका व्यावसायिक फर्महरूको घरजग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाएको छ । त्यसैगरी २७२ फर्मको भ्याट नम्बर खारेज गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत दि...
प्रदेश–१ मा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च
विराटनगर (अस) । प्रदेश नम्बर १ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशले गत आवमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ३७ करोड (५८ दशमलव ५१ प्रतिशत) र चालूतर्फ ९ अर्ब ८० करोड (५७ दशमलव ७४ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको प्रद...
साउन ३, इलाम । इलाम चियाको राजधानी हो । यहाँ मानिस चिया किन्न मात्र नभई चियाबारी क्षेत्र घुम्न पनि आउने गर्छन् । तर, पछिल्लो समय चियाका लागि प्रख्यात मानिने इलाममा कफी खेती पनि हुन थालेको छ । किसानले कफीको व्यावसायिक खेती गर्न थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको एक सर...